Portal:Woqooyiga Ameerika - Gpedia, Your Encyclopedia
Kanada waa wadan ku yaalo Woqooyiga Ameerika waxoona ku fadhiyaa dhul balaaran. Kanada waxee xuduud la leedahay dalka Mareykanka oo goboladiisa badan ka xiga Koonfur iyo gobolka Alaska oo ka xigta Woqooyi Galbeed, dhinaca bariga neh waxaa kaga dhagan badweynta Atlantik.Kanada waa Dawladda labaad ee ugu ween aduunka, ayadoo Dawladda koowaad ay tahay Ruushka. wadanka kanada waxaa markiisa hore degenaan jiray dadka indianka ah oo assalkooda ka imaaday qaarada aasiya iyo dad inuit ah oo u badan griinland. wadanka kanada dadkii ugu horeeyay oo soo booqday waxee ahaayeen dad yurubiyan ah 1000 sano ka hor, gaar ahaan vikingka norwajka, laakiin 600 oo sano kadib ee ajaaniibta badanaa soo wada galeen.
Xuquuqda sawirka: Edward S. Curtis
Aqal wickiup waxaa dhisan jirey qabiilada Ameerikaanka Asalka ah ee loogu tagay qaarada Waqooyiga Ameerika.